Nin isagoo bartiisa fadhiyaa bariis loogu keenaa, nina isagoo baahan buu baladka baahi la joogaa.
Written by bile mohamed on 13 November 2017 .
Ma rabo inaan wax badan sheego waxaana dareemi doontaa sawirada aan hoos kugu soo bandhigay & waxa ay ka turjumayaan, Maanta xiligii sallaada duhur ka dib ayaa bartamaha laamiga mashquulka badan ee km4 ayaa nin Kabalyeeri ah oo dadka Jeebabka Buuran ee saaran dabaqyada u geeyn jiray qado, ayaa waxaa isagoo qado wado ku duldhacay nin dhalin yaro ah oo aad u tabaaleeysan. Ninka dhalinyarada waa liicayay oo xaalada ayaa si ka ahayd kan kalena shaqo ayuu ku jiray, oo meesha shil ayaa ka dhacay.
Ninkii qadada siday ninkii dhalinyarada markuu ku duldhacay ayaa waxaa ka daatayay qadaddi uu siday, ka dib dagaal ayaa dhex maray, ninka qadada daadiyay waxaa la leeyahay soo gud, oo lacagta bixi illeen isagaa daadiyay si kam ahee, isagana waxa uu sanka la raacayaa bariiskii dhulka daadsanaa.
Arintooda ayaa isku dhabaqday, ninkii qadada loo waday ayaa dhararsaday hoos ayuu soo eegay mise xaalad baa jirtay oo meel xun mareeysa.
Qadadii ninki waa gudi waayay waana la iska cafiyay muran dheer ka dib, qadadii oo meesha taalay ayaa la isku dagaalay anaa cumaayo & anaa cunaayo lakala boobay ninkii kor kasoo eeganayaayay ayaa waxa dhacaayo kor ugu jeedday ka dib is ogaaday inuu Qatar ku jiro maadaama isagoo bartiisa fadhiya qado loogu keeno kuwa kalena iyagoo baahan baladka boga ku haystaan.
Asad Abukar Ali (Asad Dhayow)
AAYAHANOLOSHA WAA UDUB DHEXAADKA ARIMAHA BULSHADA.!!.